Umnyango uphendula ngelomtholampilo waseSobantu | News24
Umnyango uphendula ngelomtholampilo waseSobantu
UMNYANGO wezeMpilo esifundazweni saKwaZulu-Natal ugcine uphefumulile ngodaba lo mtholampilo osendaweni yaseSobantu osolwa ngokungasebenzi ngendlela egculisayo.
I-Echo ike yabika ngalolu daba oshicilelweni layo lango mhla zingama-31 kuNhlaba (May) nonyaka ngaphansi kwesihloko esithi ‘Bakhala ngokusebenza ngomtholampilo eSobantu’ nalapho umphakathi kade ukhala ngendlela lo mtholampilo osebenza ngayo.
Lo mphakathi ubukhala ngokuthi uchitha usuku lonke kulo mtholampilo ulinde ukusizwa ngenxa yokuhamba kancane komsebenzi. Ubuphinde ukhale nangokuthi abahlengikazi abakhona abenele kanti nalabo abakhona bathatha isikhathi sabo ukuthi basize umphakathi nokugcina sekwenza olayini bahambe kancane kuze kushaye isikhathi sokuvalwa kulo mtholampilo.
Okhulumela uMnyango wezeMpilo wesifundazweni uNkk Ncumisa Mafunda uthe bengumnyango sebezitholile izikhalo zomphakathi.
“Sizibonile izikhalazo zamalunga omphakathi asebenzisa lo mthalampilo kanti futhi sesizidlulisele kubaphathi bezempilo esiFundeni uMgungundlovu ukuba bazisukumele. Udaba lokushoda kwabahlengikazi asikwazi njengoba izincwadi zethu ziveza ukuthi lo mtholampilo unabahlengikazi abanele,” kuphetha yena.